01/07/2006: Submitted for publication via web
Milicsiga maansooyinkii Abwaan "Qaasim" (Dad musbaar dhegaha kaga jiraan, maqal ka tuugaaye. 1964 Q.
Waxaynu qaybtii koowaad ku soo qaadanay dhawr maanso oo ay ka mid ahaayeen, (Mugdi, Hargeysa, Macaan iyo qadhaadh). Qormadan maanta waxan ku soo qaadan doonaa dhawr maansoo kale. Balse inta aanaan guda gelin qoraalka, waxan mahad ballaadhan u soo jeedinayaa qoraaga caanka ah, abwaan, Cabdiraxmaan Cabdilahi "Guribarwaaqo". Cabdiraxmaan wuxuu qoraal dheer ka qoray Abwaan Qaasim sannadkii 2002, qoraalkaas oo ku soo baxay "Hal-aqoon". Runtii waa arrin aad u qiimo badan in la ururiyo oo la kaydiyo dhacdooyinka inna soo maray. Anigoo tixraacaya qoraalada Cabadiraxmaan "Guribarwaaqo" aan ku bilaabo, horta waa kuma Axmed Ismaaciil Diiriye "Qaasim".
Qaasim, wuxuu ku dhashay magaalada Mandheera, gu'gii 1933-kii. Abwaanku wuxuu ku barbaaray miyiga ilaa 12 jirkiisii. Kadib Hargeysa ayuu yimi oo uu ka bilaabay waxabarashadiisii ugu horraysay dugsiga Axmed Gurey. Magaalooyinka kale ee uu waxbarashada ku soo qaatay waxa ka mid ah Burco iyo Sheekh. Macallimiintii xilligaa wax u dhigi jirey waxa ka mid ahaa ilaahay haw naxariisto'e Maxamed Jamac Badmaax iyo Xaaji Muse Galaal. Kadib wuxuu u dhoofay magaalada Cadan ee dalka Yaman, wuxuuna soo laabtay markii uu maamulkii ingiriisku ka laalaabtay carriga Somaliland. Wuxuuna shaqaale ka noqday dawladda hoose ee magaalada Burco. Intaa dabadeed aan u soo gonda-dego maansooyinkii halganka. Waxaan ugu horraysiinayaa maanso la magacbaxday "Xiddigtii dagaari" oo uu abwaanku tiriyey 1964kii. Wuxuu ku bilaabayaa sharraxaad uu ka bixinayo sida adduunku u hore-maray, halka la higsanayo, dedaalka loogu jiro in dayaxa la tago iyo guud ahaan aqoontu halka ay marayso.
Dayaxaa la kala boobayaa iyo dirirkii cawleede
Xiddigtii dagaariyo la dhaaf diillintii Guray'e
Dibbaa laxaha loo eegayaa sacana waa daafe
Duqii samada lagu sheegayiyo dide cirjiidhiiye
Dabaylaha ragbaa kala yaqaan dawga loo maro'e
Hadba waqalka dihin Ruushku waw-doogsin cararaaye
Daruuraha la weeraray nin ogi dib uga faallooye
U fiirso tusaalayaasha runta ah ee uu abwaanku inna tusinayo. Wuxuu dadka u sheegayaa 1964-kii in Ruushku samada u socdo, in rag badan oo kalena ay xiddiga higsanayaan. Waxaynu xasuusannahay "Dagaalkii xidigaha" ee siddeetamaadkii dhexmaray Ruushka iyo Maraykanka. Hadaba aragtida Abwaan, Qaasim oo xilligaa ahaa nin dhallinyaro ah, wuxuu doonayey in raggaa lala tartamo, waana guubaabo ilaa maanta nool. Intaa marka uu dhaafo ayuu qeexayaa halka isaga iyo dadkiisii ay taagan yihiin.
Nin da'dii halkaa gaadhay oo daallanbaan ahaye
Hayeeshee dabkeedu ha ba'ee doqoni waa mooge
Daab godina sooma jarin wiilashaan diraye
Halka dunida lagu geeddi yahay deyiba maayaane
Umaddii daryeel weli mahelin daacadda ahaaye
Sidii bay duleedada dharli'i ugu dabjeexaane
Sidii baa du'dada aar dhiciyo dacaw u joogaaye
Sidii baa dugaag uga gurtaa daaqa xoolaha'e
Oo weliba dibindaabyo-iyo diriri joogtaaye
Waakaa dareersaday Axmaar dayr cadkii dhalaye
Danbi ku hadli maayo'e ma'arag dawladdaan rabaye
Misna laguma diirsade qalbigu waadirkii Karal'e
Sidii aan deyeysanahay miyaan dawgii ka habaabay
Waxba hadalku yuu iladurkine waxan ku soo duubay
Mar uunbuu dafsoo odhan nabsigii diinku soo sidaye
Mar uunbay daruur caafimaad dooxa soo rogiye
Dirridaa abaarta ah marbaa doog kasoo bixiye
Dibjirkiyo reer miyigu marbay daasadaa qubiye
Mar uunbuu digiigixan raggii daalanaan jiraye
Dibnihii shakaallaa marbaa dooda loo furiye
Markaasaa la daydayan xaqii naga dahsoonaaye.
Abwaan, Axmed Ismaaciil Diiriye "Qaasim" wuxuu gabaygaa ku sheegay meesha dunidu ku socoto iyo halka aynu xilligaa taagnayn (42sannadood dabadeed weli halkii baynu joognaa). Abwaanku muu rajo dhigin ee wuxuu gabayga ku soo gunaanaday rajo wanaagsan. Ilaa maantana rajadaas baynu qabnaa. Sannadihii lixdamaadkii ayuu Qaasim si aad u qiimo badan u soo gudbiyey gabayo aan ilaa maanta qaar u dhigma lahayn. Sida gabayga kor ku xusan oo kale waa gabay, bixinaya cashar oo aad ka dhex arkayso ujeedada oo dhan. Hadii ay dhalliil tahay, haddii ay wax-sheegtahay iyo inaan la quusan. Waxaan ku soo afmeerayaa milicsigii maansooyinka Abwaan Qaasim Gabaygan hoosta ku qoran oo uu abwaanku curiyey 1960kii, waana maanso la magacbaxday "Gobaad".
Hashaan gaaxinayaan lahaa gorofka way buuxin
Geyaxa hashaan kaga xidhxidhay gabantii nuugaysay
Geedkii magoolaba hashaan uga garaacaayey
Gaaroodi iyo Hawd hashii laba gardaaqaysay
Wax-layidhi haddaa goodirkii lagu gabraartaaye
Waxla yidhi golbaa lagu dabraa geed-waraabe leh'e
Wax-layidhi gujaa lagu lisaa labada gooroode
Wax-la yidhi gal daayeer cabbaa habari geysaaye
Golqaniinna waa loogu daraa yaanay gaagixine
Wax-layidhi gomode naasihii giigsanaan jiraye
Gobaad waxay la daaqdaa sagaal goroyocaw-loode
Googooye! iyo wiil xunbaa gaawahaw sido'e
Wallee ama gumooboo sidaa layga gallad haysay
Walle ama rag ways gaadayaa gacan ku ciil beelay.
Waxa hubaal ah in dhallinyaro badan oo maanta joogta, haddii ay gabayadaa akhriyaan aanay waxba ka fahmaynin. Waa ayaan darro oo afkaagii iyo sarbeebtaadii afkaagu lahaa oo aad garan weydaa waa nacasnimo. Xataa dad badan oo aan ku korin qurbaha oo maanta dalkii hooyo ku sagan ayaan garanayn ujeedada iyo macnaha gabayadaasi xanbaarsanyihiin. Hasha uu Qaasim ka hadlayaa waa tee. Gobaad waa tuma. Neefkan geela ah ee darxumada ku nool ee uu abwaanka u doodayaa waa maxay. Runtii abwaan Qaasim qaabka uu u dhigayo gabayadiisu waa mid soo jiidanaysa dareenka qofka fahmaya. Abwaan Axmed Ismaaciil Diiriye "Qaasim" wuxuu innaga mudanyahay billad geesi. Wuxuu innaga mudanyahay in la qoro maansooyin-kiisii oo si qoto dheer loo qeexo erayada adag ee ku jira gabayada. In ujeedada maansadu xanbaarsantahay la dooxo oo sharraxaad qofkastaaba fahmi karo lagu qoro.